Huteel qurux badan oo laga furay gudaha magaalada Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessHuteel qurux badan oo laga furay gudaha magaalada Garoowe
May 6, 2017 Shafei Osman Yusuf Business, Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiim Cumar Camay oo xariga ka jaray furitaankii huteel Grand ee Garoowe. [Xigashada Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa huteel qurux badan ka furay gudaha magaalada Garoowe xalay oo Sabti ahayd.
Huteel Grand ayaa kamid ah kuwa ugu quruxda badan gudaha magaalada, kaasoo ay maalgeliyeen qurbajoogta dalka kusoo laabanaysa.
Isaga oo ka hadlayay munaasabadii furitaanka, Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in huteelka uu calaamad u yahay horumarka magaalada.
Munaasabada dhexdeedii, mulkiilayaasha huteelka ayaa sheegay in huteelku uu martidiisa siin doono adeeg lamid ah kuwa ay bixiyaan huteelada kuyaala wadamada horumaray.
Huteelka ayaa leh qolol qurux badan oo ay ku xiranyihiin taleefishino iyo adeeg internet oo bilaash ah, makhaayad iyo meherad shaah.
Intii lagu guda jiray sanadadii dhawaa ee laga soo gudbay, magaalada Garoowe ayaa soo jiidatay maalgeliyeyaasha kuwaasoo raba in ay maalgashi ka sameystaan gudaha Garoowe.
Shirkado ganacsi oo cusub, dukaamo, meherado shaah iyo makhaayado ayaa laga furay gudaha Garoowe sanadadii u dambeysay.
November 24, 2016 Soomaaliya oo bartilmaameedsanaysa suuqyo cusub oo loo dhoofiyo geela
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland security forces have released names and pictures of five Al-Shabab radicals who behind suicide bombing in Galkayo last week, which killed at least 30 people. Biodata: Name: Mohamed Bashir Mohamed Jama, known [...]
Somali military court gives death sentence to three Al-Shabab members
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali military court on Wednesday sentenced three Al-Shabab members to death penalty. The chairman of the military court Hassan Nuur Shuute has said that the three members were behind an explosion at a [...]
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo sheegay in qaar katirsan Al-Shabaab loo wareejiyay Muqdisho ay baxsadeen
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa sheegay in xubno katirsan Al-Shabaab kuwaasoo loo wareejiyay Muqdisho, qeyb kamid ah ay baxsadeen, ayna ku biireen maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. “Wararka aanu [...]